ထောင်ထဲမှာနေချင်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ရုတ်တရက်များလာ!!!! - JAPO Japanese News
သော 24 Jan 2020, 11:39 မနက်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ နံပါတ်တစ် အသက်အရှည်ဆုံးလို့ပြောရင် အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဂျပန်နိုင်ငံပဲပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပိုပိုပြီးများလာတဲ့ လူကြီးတွေက ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်လာကြတယ်။
လူဦးရေ 126.8 သန်းရှိတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ 65 နှစ်အထက် လူကြီးတွေကပဲ 26% လောက်ကို ရှိနေပါတယ်။ မွေးဖွားမှုနှုန်းကနည်းပြီး အသက်ရှည်ကြတဲ့ လူကြီးတွေကတော့ ပိုပိုပြီးများလာတာပေါ့။
26% ဆိုတဲ့ကိန်းကဏာန်းက အခုနောက်ပိုင်း ပြန်တွက်ထားတာမပါသေးပါဘူး။
လာမယ့် 2060 ခုနစ်လောက်မှာ 40% လောက်အထိ ဖြစ်နိုင်ချေတွေရှိနေတယ်တဲ့။
ဒီလိုများလာတဲ့ လူကြီးတွေအတွက် ကျန်းမာရေးအာမခံကြေး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအာမခံကြေးတွေကလည်း အစိုးရရဲ့ ဘတ်ဂျက်ကို စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့
အလုပ်လုပ်နေတုန်းမှာ ပိုက်ဆံစုပေးပြီး၊ အသက်ကြီးပြီး အလုပ်ကနေအနားယူတဲ့အခါ ပြန်ပေးတဲ့ စနစ်လေးတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အိုမင်းတဲ့အခါ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘဲ အေးအေးဆေးဆေး နေသွားလို့ရတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ မွေးဖွားမှုနှုန်းနည်းပြီး အသက်ကြီးသူတွေကပဲ ပိုများလာတော့ တစ်နည်းပြောရရင် အခွန်ဆောင်မယ့်သူတွေ မရှိတာပေါ့
အဲ့တော့ အခွန်ရမယ့်အစား ပြန်ထောက်ပံ့ရတာက ပိုများနေတော့ အဲ့ဒီပင်စင်စနစ်လည်း ဒေ၀ါလီ ခံသွားရရှာတာပါပဲ…
လက်ရှိပေးနေတဲ့ ပင်စင်က ပိုပြီးနည်းသထက်နည်းလာတာကို မြင်နေတဲ့ လူငယ်တွေကလည်း “ ငါတို့အလှည့်ကျရင် ပေးတောင်ပေးပါတော့မလား” လို့တွေးပြီး၊ အခွန်ပေးရမယ့်ဟာကို ရှောင်နေတာမျိုးရှိလာပါတယ်။
ဒီလိုအခွန်တွေကို ရှောင်လေလေ အသက်ကြီးသူတွေအတွက်ပြန်လည်ပတ်ပေးရမယ့် ပင်စင်လစာရန်ပုံငွေတွေလည်း မရှိသလောက်ကိုဖြစ်သွားပြီး ကျပ်တည်းလာတာပေါ့..
ဒီလို ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်း သူ့အကြောင်းနဲ့သူ ရှိတဲ့အထဲမှာမှ အသက်ကြီးသူတွေရဲ့ ရာဇ၀တ်မှုက ပိုဆိုးလာလေလေပဲ..
ဒီအနှစ် ၂၀ အတွင်းမှာ ခန့်မှန်းချေ ၄ ကြိမ်လောက်ရှိနေပါပြီ။
ကျူးလွန်သူတွေရဲ့ ၁၈.၈ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အသက်ကြီးသူတွေပါပဲတဲ့..
ပိုက်ဆံလိုချင်လို့မဟုတ်ဘဲ၊ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ထောင်ထဲမှာနေချင်လို့ပါတဲ့ကွယ်…..
ထောင်ထဲမှာဆိုရင် အိမ်လခလည်းပေးစရာမလို၊ ထမင်းပါတစ်ခါတည်းကျွေးတော့ သူတို့အတွက် ပူစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့..
လိုအပ်ရင် ဆေးကုသမှုတောင် ရနိုင်တယ်တဲ့..
ဒါပါပဲ,, ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အသက်ကြီးသူတွေက အိုစာမင်းစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေကြရတာက ပိုပြီးတောင်များလာပါတယ်။
ရာဇ၀တ်မှုကို ကျူးလွန်ပြီးတော့ ထောင်ထဲ၀င်ကြတယ်။ ထောင်ကပြန်ထွက်လာတော့လည်း နောက်တစ်ခါ ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုကို ထပ်လုပ်ပြီး ထောင်ထဲကို ပျော်ပျော်ကြီး ပြန်၀င်ကြပြန်ရော..
ရာဇ၀တ်မှုကို ကျူးလွန်ဖို့က အဓိကရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်တဲ့အတွက် အပြစ်သေးသေးလေးတွေကနေ စလုပ်တာပေါ့။ အမှုကလည်း သိပ်မကြီးတော့ မကြာပါဘူး ထောင်ကနေပြန်ထွက်ရပြန်ရော။
ဒီလိုပဲ သံသရာလည်ရင်း ထောင်ထဲမှာ ကြာကြာနေရအောင် ဆိုပြီး တဖြည်းဖြည်း အမှုအကြီးကြီးတွေ ဖြစ်လာကြပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ လုံခြုံရေးပျက်စီးမှုရဲ့ အဓိကတရားခံပေါ့..
ဒါ့အပြင် ထောင်သားတွေအတွက် ကုန်ကျမှုကလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကလည်း အခွန်တွေရမှ ပြန်လည်ပတ်လို့ရမှာလေ..။ ထောင်ထဲကျနေတဲ့ လူတစ်ယောက်တည်းအတွက်ကိုပဲ တစ်နှစ်တစ်နှစ် ယန်း သောင်း ၃၈၀ ကုန်ကျတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေဆို သူတို့လိုအပ်တဲ့ ဆေးဖိုး၀ါးခတွေပါ ထည့်ပေါင်းရင် ယန်းပေါင်း သောင်း ၄၃၀ ပါတဲ့။
ဘယ်လောက်ပဲ ပင်စင်လစာကိုလျှော့လိုက်ပေမဲ့၊ တစ်ဖက်မှာလည်း ဒီလိုထောင်ကိစ္စတွေဖြစ်လာတာကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘတ်ဂျက်က ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိလာပါတယ်။
ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဆီ ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်သွားနေရအုံးမယ်ထင်ပါတယ်!!!
ဒါကြောင့်မို့လို့ ထောင်ထဲကိုတော့ လူသတ်မှုတွေအထိကျူးလွန်တဲ့လူကိုပဲ သွားခိုင်းပြီး ပုံမှန်သိပ်ပြီး ပြစ်မှုမမြှောက်တဲ့ လူကြီးတွေအတွက်ကိုတော့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ ဂေဟာလိုမျိုး ဖွင့်လိုက်ရင် မကောင်းဘူးလာ? ” ဆိုပြီး အကြံပေးသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
長寿　＝　幸せ、喜び
အသက်ရှည်ခြင်း = ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ၀မ်းမြောက်ခြင်း
ဒီဆိုရိုးစကားက ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်တော့ မဟုတ်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ အလှည့်ကျရင်ရော ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာအုံးမလဲ..?